Iindaba - Zeziphi iintyatyambo kunye nezityalo ezikunceda ukuba uhlale usempilweni
Ukufumana ngokufanelekileyo iigesi eziyingozi zangaphakathi, i-cholrophytum ziintyatyambo zokuqala ezinokukhula kumakhaya amatsha. I-Chlorophytum yaziwa ngokuba yi "purifier" kwigumbi, elinamandla okufunxa i-formaldehyde.
Ikhala sisityalo esiluhlaza sendalo esihombisa nokucoca okusingqongileyo. Ayikhuphi ioksijini kuphela emini, kodwa ifunxa nekharbon diokside kwigumbi ebusuku. Ngaphantsi kwemeko yokukhanya kweeyure ezingama-24, inokuphelisa i-formaldehyde equlethwe emoyeni.
I-Agave, isankuluia kunye nezinye iintyatyambo, zinokufunxa ngaphezulu kwe-80% yeegesi eziyingozi zangaphakathi, kwaye zikwanakho nokufunxa okuphezulu kwe-formaldehyde.
I-Cactus, enje nge-echinocactus grusonii kunye nezinye iintyatyambo, inokufunxa iigesi eziyityhefu nezinobungozi eziveliswa kukuhonjiswa njenge-formaldehyde kunye ne-ether, kwaye inokufunxa imitha yecompyuter.
I-cycas iyincutshe ekufunxeni ungcoliseko lwe-benzene yangaphakathi, kwaye inokubola ngokufanelekileyo i-formaldehyde kwiikhaphethi, izinto zokwambathisa, iplywood, kunye ne-xylene efihliweyo kwiimifanekiso eziyingozi kwizintso.
I-Spathiphyllum inokucoca ngaphandle inkunkuma yangaphakathi, kwaye ineziphumo ezithile zokucoca kwi-helium, benzene kunye ne-formaldehyde. Kwinqanaba lokucoca i-ozone liphezulu kakhulu, libekwe ecaleni kwerhasi yasekhitshini, linokucoca umoya, lisuse incasa yokupheka, isibane esimnyama kunye nomcimbi oguqukayo.
Ukongeza, irose inokufunxa iigesi eziyingozi ngakumbi njengehydrogen sulfide, hydrogen fluoride, phenol, kunye neether. IDaisy neDieffenbachia inokuwususa ngokufanelekileyo ungcoliseko lwe-trifluoroethylene. I-Chrysanthemum inesakhono sokufumana i-benzene kunye ne-xylene, ukunciphisa ukungcoliseka kwe-benzene.
Ukulinywa kweentyatyambo zangaphakathi kufuneka kukhethe iintlobo ngokweemfuno zokwenyani. Ngokubanzi, kufanele ukuba ilandele imigaqo-nkqubo yokungabikho kokukhutshwa kwezinto eziyingozi, ukugcinwa ngokulula, ivumba elinoxolo, kunye nobungakanani obufanelekileyo. Kodwa i-pls kufuneka iqatshelwe nangona iintyatyambo zinefuthe elingcono lokucoca umoya, eyona ndlela yokucoca umoya kukomeleza umoya wokungenisa umoya kunye nokuhlaziya umoya ongaphakathi.